အမြင့်အပူ Epoxy မှအကောင်းဆုံး အမြင့်အပူ Epoxy မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Taiwan ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, Soar Technology Co., Ltd ပေးလူသိများသောကုမ္ပဏီခဲ့ အမြင့်အပူ Epoxy ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအတွက်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းများအားလုံးလိုက်နာဖြစ်ကြောင်းနှင့် delivery မီ 100% စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်နေပေမယ့်လည်းတစ်ဦးနှင့်အရည်အသွေးကို trustable အမှတ်တံဆိပ်တက် setting နေကြသည်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်တော်သောစျေးနှုန်းနှင့်စိတ်တွင် prompt ကိုပေးအပ်ခြင်းနှင့်တကွ, ပြည့်စုံသောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောတီထွင်ဆန်းသစ်မှုစောင့်ရှောက်လော့။ ငါတို့သည်လည်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှကြိုဆိုထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပေး! ကျွန်တော်တို့ဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာသင်တို့နှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးရှိလိုရှိ၏။
ပျံဝဲ-EP-2007-8190-မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်ခု epoxy ဗဓေလသစ်ကော်.ဤဗဓေလသစ်စနစ်သည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအတွက်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောနှောင်ကြိုးသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်အထူးမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးခိုင်မာသည့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်.မာကြောသောပစ္စည်းများသည်ပုံပျက်သောအပူချိန်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,SOAR ၏နှောင်ကြိုးအစွမ်းသတ္တိကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှုနှုန်း-EP-2007-မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ 8190 သည်အခြားဘုံအမင်ခိုင်မာ epoxy ဗဓေလသစ်များထက်သာလွန်သည်.ပိုမိုမာလာသည်-EP-2007-8190 တွင်အပူမြင့်သောပုံပျက်သောအပူချိန်ရှိသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာကောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်.SOAR ၏တင်းမာအခြေအနေများ-EP-2007-8190 သည်အချိန်နှင့်မုန့်ဖုတ်အပူချိန်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်.မုန့်ဖုတ်အပူချိန်ပိုမိုမြင့်မား,လိုအပ်သည်တိုတောင်းမုန့်ဖုတ်အချိန်.ဒီဗဓေလသစ်ပြီးနောက်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာပျောက်ကင်းအောင်ကုသသည်,အကောင်းဆုံးသောအမျိုးမျိုးသောအရည်အသွေးနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိနိုင်သည်.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 ရှည်နိုင်သည်-စိုထိုင်းဆကျယ်ပြန့်အတွက် term ကိုဓာတ်တိုးခုခံနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခိုင်မာစေ၏,နှင့် SOAR-EP-2007-8190 သည် 200oC ထက်ကျော်လွန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်မြင့်မားသောဓာတ်ပြုခြင်းရှိသည်.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 lamination များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,ပြုတ်ရည်,ပုံသွန်း,အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကော်,နှင့်လျှပ်စစ်စက်ယန္တရား၏လယ်ပြင်၌ထင်ရှား။ ,,အီလက်ထရောနစ်,လေကြောင်း,မော်တော်ကားနှင့်အပန်းဖြေ...စသည်တို့.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95EC RoHS စည်းမျဉ်းများ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/high-heat-epoxy.html
အကောင်းဆုံး အမြင့်အပူ Epoxy ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် အမြင့်အပူ Epoxy ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်